Samsung PRO ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော SD ကဒ်များ | Gadget သတင်း
Samsung PRO ခံနိုင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော SD ကဒ်များ
ပြင်ပသိုလှောင်မှုသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်ပစ္စည်းများတွင် ပို၍ များလာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ရုပ်ပုံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖမ်းယူအသုံးပြုနေပြီးဤပမာဏသည်မီဒီယာအားလုံးကိုပြင်ဆင်မထားပါ။ ထို့ကြောင့် SD format ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အသစ်များသည်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည် Samsung က PRO ခံနိုငျရညျ.
ဆမ်ဆောင်းသည်ဤမှတ်ဉာဏ်ကဒ်အမျိုးအစားကိုစျေးကွက်တွင်သုံးစွဲသူများ (သို့) အသံဖမ်းစက်သုံးမျိုးကိုအဓိကထားသည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကင်မရာများ, လှုပ်ရှားမှုကင်မရာများနှင့် dashcams များ (ဘုတ်ယာဉ်များပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားကင်မရာများ) ။ သူတို့အားလုံးမှာဘာတူညီချက်ရှိသလဲ။ ၎င်းတို့သည်ဗီဒီယိုကိုအဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းတင်နေသောအဖွဲ့များဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောမီဒီယာ၏သက်တမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
Samsung PRO Endurance သည်နာရီ ၄၃,၈၀၀ အထိဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ Full HD resolution ရှိပေမယ့် 43.800K resolution ရှိဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း, Samsung PRO Endurance ကို ၃၂ ခု၊ ၃၂၊ ၆၄ နှင့် ၁၂၈ GB တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်.
သူတို့အားလုံးပူဇော်လိမ့်မည် 100MB / s အထိဖတ်နှုန်းနှင့်အမြန်နှုန်း 30MB / s အထိရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Samsung သည်ဤကဒ်များ၏ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်နာရီများ၏တိကျသောအချက်အလက်များကိုလည်းပေးခဲ့သည်
32 GB ကိုနာရီ ၁၇,၅၂၀ အထိ
64 GB ကို: သုံးနာရီ
128 GB ကို: သုံးနာရီ
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Samsung PRO Endurance သည် SD format ခံကဒ်များသာမကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိသည် သူတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဤကတ်များသည်အလွန်ပြင်းထန်သောအပူချိန်၊ ရေ၊ သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုကင်မရာတွေအကြောင်းပြောရင်တောင်သူတို့ဟာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရရင်တောင်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုစီ၏ဈေးနှုန်းသည် ၃၇.၉၉ ယူရို (၃၂ GB) ဖြစ်သည်။ ၇၁.၉၉ ယူရို (၆၄ GB) နှင့် ၁၃၄.၉၉ ယူရို (37,99 GB) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Samsung PRO ခံနိုင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော SD ကဒ်များ
Xiaomi သည်ဗြိတိန်၊ အိုင်ယာလန်၊ သြစတြီးယား၊ ဒိန်းမတ်၊ အီတလီနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသို့ဆင်းသက်ရန်ပြင်ဆင်သည်
ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံရရှိပြီးနောက် Telegram သည်၎င်း၏ ICO ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်